एमाले–माओवादी पार्टी एक हुने वातावरण कसरी बन्यो? « News24 : Premium News Channel
एमाले–माओवादी पार्टी एक हुने वातावरण कसरी बन्यो?
काठमाडौँ । एमाले–माओवादी संसद, सडक र सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई लाञ्छना र आरोप लगाउँदै जुहारी खेलेर समय गुजारीरहेका थिए । तर, एकाएक चुनावी तालमेल र पार्टी नै एक बनाउने निर्णयले सबै चकित परे । ट्वाँ परे ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु ००६ सालदेखि नै ‘सामान्य मनमुटावमै टुक्रिने र विना कारण मिल्दिहाल्ने’ फूर्के शैली पाइन्छ । दुई दशककै सेरोफेरोलाई केलाउदा पनि एमाले–माओवादीको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण भन्दा पनि सत्तोसरापमै व्यतित भएको देखिन्छ । खासगरी, कहिल्यै सुमधुर बन्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सम्बन्ध १२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् मित्रतामा बदलएिको थियो । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
दुवै नेताको मिलनकै कारण नेपालमा वर्तमान संविधान मात्रै बनेन ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए । तर, आफैँले समर्थन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रचण्डले करिब ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । यो घटनाले दुई नेताबीच फेरि दूरी बढाइदियो । ओली–प्रचण्डबीच संसद्मै जुहारी चल्न थाल्यो । उनीहरुबीचको सम्बन्धनमा पुनः दरार उत्पन्न भयो । दुवै पार्टीका कार्यकता गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरु फुटिरहने र एक अर्कालाई देखिन सहने रोगको फाइदा लामो समय कांग्रेसले उठाउँदै आयो र ऊ पटक–पटक सत्ताकै वरिपरि रहिरह्यो भन्दा अतियुक्ति नहोला । ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रचण्ड र प्रचण्डको समर्थनमा देउवा किस्ताबन्दीमा प्रधानमन्त्री भए ।
प्रचण्डले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराएपछि ‘इमानको राजनीतिको खाँचो’ औल्याउँदै राजीनामा दिए र देउवा प्रधानमन्त्री भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँ सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो । तर, त्यसले सुखद् परिणाम दिन सकेन । बरु, सीमित ठाउँमा भएका एमाले–माओवादी तालमेल बढी विश्वासिलो देखियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमियो । एमालेले देशभरको चुनावी परिणाम मसिनो तरिकाले केलाउँदा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई देख्यो । कांग्रेस–एमालेको मतान्तर धेरै ठाउँमा ५ हजार आसपासको देखेको र एमालेले निर्धक्कसँग जित्ने ठाउँ ‘इलाम र धनकुटा’ मात्र रहेको एमालेले निष्कर्ष निकाल्यो ।
हुन त एमाले २ नम्बर प्रदेशमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम देखेर नै झस्किएको थियो । २ नम्बरमा एमाले पाँचौँ स्थानमा रहन पुग्यो । उसलाई माओवादीले समेत उछिन्यो । त्यो दुई नम्बर प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ३२ वटा र प्रदेशसभामा ६४ वटा क्षेत्र तय गरिएको थियो । यो क्षेत्रमा कमजोर नतिजाले एमालेलाई गम्भीर आघात पु¥याउने एमाले नेतृत्वले स्पष्ट देख्यो ।
एमाले नेताहरूले नै सार्वजनिक गरेका भनाइअनुसार स्थानीय तह परिणामको सम्पूर्ण विश्लेषणपछि एमाले माओवादीसँग चुनावी तालमेलमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो । र, अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चुनावी तालमेलको प्रस्तावसहित वातावरण मिलाउने जिम्मा दिए । माओवादी जनयुद्धमा रहँदै प्रचण्ड र गौतमबीच विश्वासपूर्ण सम्बन्ध रहेकाले ओलीले प्रस्ताव लिएर उनैलाई प्रचण्ड कहाँ पठाए ।
गौतम ओलीको प्रस्ताव लिएर प्रचण्डकोमा पुगे । प्रचण्ड पनि आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कोसँग तालमेल गर्ने भन्ने द्विविधामै थिए । तर, गौतममार्फत एमालेको प्रस्ताव सुनेपछि उनले अझ अगाडि बढेर भने, ‘चुनावी तालमेल मात्रै किन रु पार्टी एकता नै गरौँ ।’
प्रचण्डको प्रस्तावले यसपटक ओलीलाई पनि आकर्षित गर्यो । गौतमसँगै माओवादीबाट नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर पनि दुई पार्टी एक बनाउने भूमिकामा भित्रभित्रै सकृय थिए । अन्ततः दुवै दल तत्काल चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतामा जाने निर्णयमा पुगे ।